ကုသိုလ်ဖြစ်အောင် နှလုံးသွင်းတာကို ယောနိသော မနသိကာရလို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။
ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်က မျက်စိက မြင်စရာ အာရုံလေးတစ်ခုဟာ လောဘဖြစ်စရာဆိုရင် ကိုယ့်
မှာ ဆင်ခြင်တုံတရားရှိရပါမယ်၊ သူများပိုင်တဲ့ပစ္စည်း ဆိုလို့ ရှိရင် “ဒါ သူများပိုင်တဲ့ ပစ္စည်းနဲ့
ပတ်သက်ပြီး ငါ-လောဘဖြစ်လို့ မကောင်းဘူး၊ ငါ့မှာ လောဘမဖြစ်စေရဘူး” လို့ ဒီအတွေးမျိုး
တွေးလိုက်တာနဲ့ ဒါ- ယောနိသောမနသိကာရ လို့ခေါ်ပါတယ်။
ကံသည် ပြုလုပ်သူ ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ သန္တာန်မှာ စွမ်းရည်သတ္တိအနေနဲ့ တည်ရှိပြီး နေတယ်။ ကံ
ကိလေသာရဲ့ အကျိုးဖြစ်တဲ့ ခန္ဓာကြီး ရှိနေသမျှ ဒီကံကြမ္မာတွေ ဆိုတာက ပျောက်ကွယ်သွား
မှာမဟုတ်ဘူး။ သို့သော် ကံတိုင်း အကျိုးပေးသလားလို့ ဆိုတော့ အဲဒီလိုတော့လည်း မဟုတ်
ဘူး။ အကျိုးပေးဖို့ရာ အတွက် သူ့မှာ အခြေအနေတွေ လိုသေးတယ်။ ကုသိုလ်ကံက အကျိုး
ဒုလ္လဘ ၅ ပါးမှာ = =
၁။ ဗုဒ္ဓပ္ပာဒ ဒုလ္လဘ = ဘုရား၏ အဖြစ်ကို ရခဲခြင်း။
၂။ မနုဿတ္တဘာဝ ဒုလ္လဘ = လူ အဖြစ်ကို ရခဲခြင်း။
၃။ သဒ္ဓာသမ္ပတ္တိ ဒုလ္လဘ = သဒ္ဓာတရားနဲ့ ပြည့်စုံသည့် အဖြစ်ကို ရခဲခြင်း။
၄။ ပဗ္ဗဇ္ဇိတဘာဝ ဒုလ္လဘ = ရဟန်း၏ အဖြစ်ကို ရခဲခြင်း။
၁။ ယဿာနုဘာဝတော ယက္ခာ ၊ နေ၀ ဒဿန္တိဘီသနံ။ ယဥှိစေ၀ါနုယုဉ္စန္တော ၊ ရတ္တိန္ဒိဝ မတန္ဒိတော
( မေတ္တာသုတ်အစွမ်းတန်ခိုးကြောင့် နတ်တွေ ဘီလူးတွေ ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဆို ကြောက်စရာ လန့်စရာ တွေကိုမပြ၀ံ့ကြဘူး မခြောက်လှန့်ကြဘူး။ အဲဒီမေတ္တာဘာဝနာလုပ်ငန်းမှာ စဉ်ဆက်မပြတ် ကြိုးပမ်း အားထုတ်မယ်ဆိုရင်. . )
သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့ (သို.) အဘိဓမ္မာ အခါတော်နေ့ (သို.) ပ၀ါရဏာနေ့
ဗုဒ္ဓဒေသနာအရ သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့ကို အဘိဓမ္မာအခါတော်နေ့အဖြစ် ပညာရှင်တို့ သတ်မှတ်ခဲ့ကြသည်။
အကြောင်းက နတ်ပြည်၌နတ်ပရိတ်များ အဘိဓမ္မာဒေသနာအကျယ်ဟောကြားပြီး ဆုံးသောနေ့သည် သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့ဖြစ်သည်။ စန္ဒကူးတော၌ အရှင်သာရိပုတ္တရာအား အဘိဓမ္မာဒေသနာအကျဉ်း ဟောကြားပြီးဆုံးသောနေ့သည်လည်း သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့ဖြစ်သည်။ အရှင်သာရိပုတ္တရာက တပည့်ငါး ရာတို့အား အ
ဘိဓမ္မာ ဒေသနာကို မကျဉ်းမကျယ် အလယ်အလတ် ဟောကြားပြီးဆုံးသော နေ့သည်လည်း သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့ဖြစ်သည်။
Posted by ဥတ္တရအလင်း at 9:06 AM No comments:
အချို့က ကမ္မဋ္ဌာန်းထိုင်တယ် ဆိုတဲ့အခါမှာ posture ကိုယ်ဟန်အနေအထား အတိုင်း
မထိုင်နိုင်ကြပါ။ အဲဒီလို အကြာကြီးထိုင်ရင် ဒုက္ခဖြစ်တယ်ဆိုပြီး ကမ္မဋ္ဌာန်းထိုင်ရမှာ ကြောက်
နေကြပါတယ်။ ကမ္မဋ္ဌာန်းထိုင်တယ်ဆိုတာ သမထအလုပ်ကိုလုပ်တဲ့ ကျန်းမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ၊
ခန္ဓာ ကိုယ်ကြံ့ခိုင်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာ မြတ်စွာဘုရား ညွှန်ကြားထားတဲ့အတိုင်း တင်ပလ္လင်ခွေထိုင်၊
သီလဗ္ဗတပရာမာသ ဆိုတာ ခွေးလို၊ နွားလိုကျင့်တဲ့ အကျင့်မျှသာ မဟုတ်ဘူး၊ ပါဠိ အ
ဌကထာများမှာ မပါတဲ့ အလေ့အကျင့် ဟူသမျှကို ယုံကြည်စွဲလမ်းတာတွေဟာ သီလဗ္ဗတပရာ
မာသ ဒိဌိချည်းပဲ။ “ သစ္စာမမြင်၊ မဂ္ဂင်မပါ၊
ယုံကြည်ဆုံးဖြတ်၊ ယူဆမှတ်၊ သီလဗ္ဗတပင်။ ”
အာရုံ ၅ ပါးမှာ = =
၁။ ရူပါရုံ = အဆင်းကို ခုံမင်လိုက်စားခြင်း။
၂။ သဒ္ဒါရုံ = အသံကို ခုံမင်လိုက်စားခြင်း။
၃။ ဂန္ဓာရုံ = အနံ့ကို ခုံမင်လိုက်စားခြင်း။
“ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကလည်း ရုတ်တရက်ချက်ချင်းကြီး မပေးသေးဘူး၊ ရင့်ကျက်မှ
အကျိုးပေးတာလည်း ရှိတယ်။ မရင့်ကျက်သေးပေမယ့် အကျိုးပေးတဲ့ကံလည်း ရှိတယ်။
တချို့ ကုသိုလ်ပေါ်မှာ မယုံမကြည်ဖြစ်လာတတ်ကာ.. ငါတို့ ကုသိုလ်တွေ လုပ်နေပါလျက်
ကောင်းကျိုးပေးတယ်ဆိုပြီး ဘယ်မှာလဲ ?.. မပေးပါလား၊ တော်ပြီ ကုသိုလ်မလုပ်တော့ဘူး၊
ပဏ္ဍိတာရာမ ရွှေတောင်ကုန်း ဆရာတော်၏ အဆိုအမိန့်များ။
ဈေးရောင်းသူဟာ အရင်းအတိုင်းရအောင်ရှုံးအောင်ရောင်းတာမဟုတ်။ အမြတ်ရအောင် ရောင်းတာဖြစ်တယ်။
ဒီလိုပဲ၊ ဗုဒ္ဓသာသနာနဲ့ ကြုံကြိုက်တုန်းလူဖြစ်နေသူတွေဟာ အရင်းနဲ့လည်း
မကျေနပ်သင့်ဘူး။ ရှုံးလည်း မရှုံးသင့်ပါဘူး။
ကုသိုလ်ကိုမမေ့ရဘူး။“ကုသိုလ်ကောင်းမှု” ကို အမြဲ ကြိုးစားအားထုတ်ရမယ်။
“အပ္ပမာဒတရား”သည် ဘာကြောင့် အရေးပါသလဲဆိုရင် ကုသိုလ်ကို ပြုမိအောင်
တိုက်တွန်း နှိုးဆော်ပေးတတ်တဲ့သဘာဝတရား ဖြစ်လို့ပါပဲ။
သော တ ပန် နှင့် စူ ဠ သော တ ပန်
သောတပန် = သောတပန္န
သောတ = ရေအယဉ် ။ အာပန္န = ရောက်သည် ။
ေေေေေေေ သောတပန္န (ဝါ) သောတပန် ပုဂ္ဂိုလ် ဆိုသည်မှာ - ဥပမာပြုရသော် အရပ်ရပ်မှ စီးဆင်းလာသော ရေအယဉ်တို့သည်
သမုဒ္ဒရာသို့ ရောက်သောအခါ နောက်သို့ ပြန်မဆုတ်ဘဲ သမုဒ္ဒရာသို့သာ ပြေးဝင်ဘိသကဲ့သို့ သောတပန်ဖြစ်သော
Posted by ဥတ္တရအလင်း at 8:51 AM No comments:
လူ နှင့် တိရစ္ဆာန်
လူနှင့် တိရစ္ဆာန် တစ်မိုးတစ်မြေ ၊ တစ်ကမ္ဘာတည်းမှာ
-လူက အကျိုး၊အပြစ် ခွဲခြားသိတယ်။
-လူက ကိုယ်ဖို့ ၊ သူ့ဖို့ဆိုတဲ့ မျှတတဲ့အကျင့်ရှိတယ်။
တိရစ္ဆာန်က ကိုယ့်ဖို့သာ အရယူတယ်။
သားသမီး မေတ္တာ လည်း ဖော်ပြသင့်သည်မဟုတ်ပါလော
မိဘ မေတ္တာ ၊ မိဘ မေတ္တာ နဲ့ ပဲ ကြားနေရတာ...........သားသမီး မေတ္တာဆိုတာ သိပ်ကြားရလေ့ မရှိပါဘူး။ အဲဒီ့ အတွက် ကျွန်မစိတ်မကောင်းပါဘူး။ ဘာလို့ လဲ ဆိုတော့မိဘတွေ သားသမီးတွေ အပေါ်မေတ္တာ ထားသလို ကျွန်မတို့ သားသမီးတွေ အပေါ်ကလဲ မိဘတွေ အပေါ် မေတ္တာထားကြတာ ရှိကြပါတယ်........။အဲဒါတွေကျတော့ ဘာလို့လူတွေ သိပ်မသိကြတာလဲ လို့
ကျွန်မ တွေးမိတယ်။ တကယ်တော့ သားသမီးတွေ လဲ မိဘ တွေ အပေါ် မှာ သူ တို့ တို့ ထားတဲ့ မေတ္တာ တရားကို မမှီရင်တောင် နီးပါးတူညီနိုင်တဲ့ မေတ္တာ တရားတွေ ရှိနေတတ်ကြပါတယ်.
Posted by ဥတ္တရအလင်း at 8:49 AM No comments:
၉၉ ပုံပြင် (ချမ်းသာခြင်းသံဝေဂ)
ရှေးအတီတေ လွန်လေပြီးသောအခါက ပစ္စေကဗုဒ္ဓါလောင်းလျာဖြစ်သော ကုဋေရှစ်ဆယ်သူဌေးသားတစ်ဦးသည် မိဘနှစ်ပါး ကွယ်လွန်ပြီးနောက် အမွေအဖြစ်ရရှိခဲ့သော ကုဋေရှစ်ဆယ်ကို အလုံးစုံလှူဒါန်းကာ တောင်းဆု(၇)ပါး ပန်ကြားခဲ့ပါသည်။ ထိုသူဌေးသား၏ ခုနှစ်ပါးသော ဆုတောင်းမှာ ကျွန်တော်နှစ်သက်သဘောကျသော ဆုတောင်း(၄)ခု ရှိပါသည်။ ယင်းတို့မှာ
Posted by ဥတ္တရအလင်း at 8:47 AM No comments:
"ပထမဦးဆုံး တရား နှင့် တရားဦးနာရသူများ"
-ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်သည် "မဟာဗောဓိ"မဏ္ဍိုင် မှ "ပဉ္စ၀ဂ္ဂီ" တို့ရှိရာ "ဗာရာဏသီပြည်၊ဣသိပတန မိဂဒါဝုန်တော" သို့ ကြွတော်မူလေရာ "မဟာသက္ကရာဇ်၊၁၀၃-ခုနှစ်၊၀ါဆိုလပြည့်နေ့"တွင် ပထမဦးဆုံးတရားဖြစ်သော "ဓမ္မစကြာ(ဓမ္မစက္ကပ၀တ္တနသုတ်) တရားဦးဒေသနာတော်" ကို ဟောကြားတော်မူပါ၏။
ကမ္မဋ္ဌာန်းအားထုတ်တယ်ဆိုတာ ၀စီကံ မဟုတ်ပါ။ ပါးစပ်ကပြောရတဲ့အလုပ် မဟုတ်ပါ။
ခန္ဓာကိုယ် အင်နဲ့အား အသုံးချပြီး လုပ်ရတဲ့အလုပ် မဟုတ်ပါ။ စိတ်နဲ့လုပ်ရမယ့်အလုပ်ဖြစ်ပါ
တယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အနေအထား ဘယ်လိုပဲနေနေ စိတ်က ဆင်ခြင်စဉ်းစားဖို့ လိုပါတယ်။
အိပ်ရင်းလည်း ဆင်ခြင်စဉ်းစားနိုင်ပါတယ်။ လမ်းလျှောက်ရင်းလည်း ဆင်ခြင်စဉ်းစားနိုင်ပါတယ်။
ဖြစ်ခိုက်ရုပ်နာမ်ကို ရှုမှတ်ပြီး တကယ်သိတဲ့ ပညာသိဖြင့်သာ ထူးခြားတဲ့ အသိဉာဏ်ကို
ဖြစ်စေနိုင်ကြောင်း၊ ကျက်မှတ်ပြီးသိတဲ့ သညာသိမျှဖြင့် အဖန်ဖန် ဆင်ခြင်နေပေမယ်လို့ ထူး
ခြားသော အသိဉာဏ်ကို မဖြစ်စေနိုင်ကြောင်းကိုလည်း လက်တွေ့စမ်းသပ်ကြည့်ရန် အောက်ပါ
အတိုင်း ပြဆို ထားပါသည်။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် လူဖြစ်ရခြင်း၏ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်သည် ဒါနကုသိုလ်၊ သီလကုသိုလ်၊
သမ ထဘာဝနာကုသိုလ်၊ ၀ိပဿနာဘာဝနာကုသိုလ်၊ မဂ်ကုသိုလ်၊ ဖိုလ်ကုသိုလ် ခြောက်မျိုးလုံးကို
အရ ယူရန်အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။ စီးပွားဥစ္စာ ရှာဖွေခြင်းသည်ပင် ထိုကုသိုလ်ခြောက်မျိုး ပြုလုပ်ရန်အ
တွက်ဖြစ်ပါတယ်။ ၃၁ ဘုံတွင် ဤလူ့ဘုံ တစ်ဘုံတည်းသာလျှင် ကုသိုလ်အားလုံးကို ပြုလုပ်နိုင်ပါ
သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့ (သို.) အဘိဓမ္မာ အခါတော်နေ့ (သိ...